Kedu ka ị na-esi enweta site d’ego na ụda gị? Ezigbo mma?
Ego ole ka ỊTTuber mere?
2.1 1-Wuru na YouTube Monétisation /
Tupu anyị agbada na ntinye ntinye nke ego ị na – eme ka ỊTuber, ka anyị lelee ụfọdụ n’ime ihe kachasị ỊTubers ma chọpụta ihe ha mere kpọmkwem.
Un site nnyocha na Nouveaux médias Rockstars na-eme ka a mata ihe nnukwu chanel na YouTube na-enweta na ọtụtụ n’ime ha nwere ike ị nweta uru bara ụba na vidio ha na ndị debanyere aha ha. Otu dị ka YouTuber bụ PewDiePie (Felix Kjellberg), onye nyere iwu banyere 500 nde ndị debanyere aha na ọwa ya na nkezi 1.5 nde echiche kwa vidio.
Ebe ọ bụ na ọnụọgụgụ ọnụọgụgụ na YouTube, PewDiePie na-enweta ihe karịrị $ 12 nde kwa afọ site na ihe niile ou simple na ihe karịrị ya. Ụzọ ọzọ, ụlọ ọrụ egwuregwu na ntụrụndụ nke Rooster Teeth Corporation, na-enweta $ 13 Million kwa afọ, ebe obere ọwa dịka Nigahiga na Epic Meal Time na-enweta kwa afọ $ 2.9 na $ 3.1 nde.
N’ozuzu, ọ bụrụ na ị bụ onye mmepụta ihe na-agbanwe agbanwe na YouTube, w nwere ike ime ezigbo ndụ na ikpo okwu site na vidiyo gị.
1-Wuru na YouTube Monétisation /
Ka anyị kwuo na i nweworị ọwa e guzobere ma bulie vidiyo ole na ole, ị nwere ike ozugbo ịmalite ịmalite na site YouTube na ịgbanwuo ya. mee ka monétisation maka akaụntụ gị na ịbanye maka Google Adsense.
Iji mee ka YouTube Monetization atụmatụ: Nbanye> Ọwa> Ọnọdụ na Akụkụ> Monétisation (ma ọ bụ, pịa ebe a).
Ịtụgharị ego na akaụntụ gị na-enye gị ohere inweta ego site na ọdịnaya mbụ gị site na mgbasa ozi na-etinye na vidiyo gị mgbe un na-ele ya anya. Ọ bụ ezie na Google Adsense bụ inyere gị alias ịtọ ozi nkwụnye ụgwọ na ikwe ka Google tinye mgbasa ozi na vidiyo gị, bụ ebe ị ga-enweta nnukwu ego YouTube gị n’ezie.
N’ikpeazụ, ị ga-etinye akwụkwọ maka a Ngwakọta mmemme YouTube mmemme nke ga – enye gị uru ole na ole na akaụntụ gị, dị ka ngwá ọrụ nyocha, ngwá ọrụ nhazi ngwa ngwa iikogi vik . Iji ghọọ Onye Mmekọ YouTube, ị ga-achọ ịnweta 10 000 echiche ọha na eze na ọwa gị (ya bụ, 1000 vidiyo na vidiyo 10) ma gụọ ya na YouTube ka ị bụrụ Onye Mmekọrịta YouTube mara mma.
Ozugbo ịmalite ịkọwa vidiyo gị, w nwere ike ịhọrọ otú ị chọrọ ka mgbasa ozi ga-apụta na vidiyo gị na ego ole ị ga-enweta ga-adabere n’otú ndị na-ege gị ntị sitet si emet. Ọ bụ ezie na ọ bụ ụzọ kachasị mfe iji nweta ego na YouTube, ọ bụkwa ihe mgbagwoju anya n’ihi na YouTube na-emepụta ya.
Ihe ndekọ YouTube na-atụle (mgbe onye na-elele pịa ma ọ bụ lelee mgbasa ozi gị) yana maka ihe ọ bụla 1000, ị ga-enweta ihe dịka 7,50 $. Nsogbu bụ otú e si gụọ echiche ahụ, ebe ọ bụ na ọ dabere na otu ndị na-ege gị ntị. Ọ bụrụ na onye na-ele anya kpebie ịkwasa site na mgbasa ozi ma ọ bụ jiri ad-blocker, ị gaghị akwụ ụgwọ maka echiche ahụ. N’ihi nke a, echiche dị elu apụtaghị na ọ bụ vidiyo na-enweta ezigbo ego. Vidio nke nwere echiche 10000 nwere ike inwe 3000 puku puku, nke na-asụgharị naanị 22,50 $.
Iji buli uru gị na vidiyo na mgbasa ozi, ị ga-achọ ịma nke mgbasa ozi kachasị mma nke ọdịnaya. Ọ bụrụ na ọ bụ obere vidiyo nke 3, mgbasa ozi gbasaa nwere ike ịdị mma karịa nchịkọta nke abụọ 30. gị ntị.
N’agbanyeghị na ọ kachasị mfe ịmepụta, site d’ego inweta na YouTube adịghị ezughị ezu n’onwe ya, nke mere ọtụtụ n’ime YouTubers na-achọta ụzọ ndị ọzọ ị ga-esi enweta ego.
Aha ukwu YouTubers dị ka Iwe Joe na Jenna marbres dabere na njikọta nke atọ ahụ iji mee ihe ha na-enweta. Ndị a bụ mgbe ọtụtụ ụzọ HowTubers si enweta ụgwọ ọrụ ha kwa afọ.
Ọ bụrụ na ị kwadoro akara gị ma nwee ezigbo ndị na-eguzosi ike n’ihe, ị nwere ike ịmalite ịzụ ngwáahịa gị site na ịkọ ya na vidiyo gị. Ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ nke gị bụ usoro dị mfe ma dị mfe na ụdị ahịa / ọrụ ị nwere ike ịnye nwere ike ịdịgasị iche, ọ bụrụhaala na ọ gbasara ndị na-ege gị ntị. Smosh, dịka ọmụmaatụ, na-emesi ọtụtụ ihe ike banyere ịzụ ahịa ma eleghị anya na-eme ka ego buru ibu ụlọ ahịa ha n’ịntanetị.
Na mgbanwe ndị YouTube mere na iwu ego ya, ọtụtụ ndị na-emepụta ọdịnaya na YouTubers agbanyewo ndị na-ege ya ntị iji kwụọ ụgwọ ọrụ ha. Ntughari ego nwere ike ịbụ isi iyi ego ma ọ bụrụ na ejiri ya rụọ ọrụ nke ọma, ma ịkwesịrị ịmara ebe ikpo okwu na-adabara ndị na-ege gị ntị.
Ụfọdụ ndị a ma ama dịka Kung oké iwe jisiri ike inweta 600 000 $ nke ego site na nkwa ya.
Ọ bụ ezie na Kickstarter na-ebute nnukwu ego a na-akwụ ụgwọ, un na-enye Patreon aka ka ọ dịkwuo ntakịrị ma ọ bụ na-aga n’ihu.
O yikarịrị ka ị ga-achọta YouTubers na-akpọ ụlọ Patreon dịka ọ nwere ike inye ego nkwụnye ego siri ike tụnyere Kickstarter. Dị ka Kickstarter, ị na-edepụta peeji nke nwere ihe mgbaru ọsọ na Patreon, ihe dị iche bụ na ihe mgbaru ọsọ bụ ịkwụ ụgwọ ego kwa ọnwa karịa otu. YouTubers na mmepụta ọdịnaya dịka Jim Sterling na Red Media Media bụ ihe atụ nke ihe ịga nke ọma na Patreon peeji nke na-enweta ihe karịrị 12 000 $ na 19 000 $ n’otu n’otu, kwa ọnwa.
Jim Streling na-ewe ụlọ 12 000 $ + kwa ọnwa maka ya YouTube chanel.
Ịmara ihe ị na-achọsi ike ma bụrụ onye ọkachamara n’ọhịa ahụ ga-enyere gị aka ịmalite, ma n’ikpeazụ, ọ ga-adabere na oge na mgbalị dị ukwuu ị dị njikere itinye aka gị-éto.
You dị mfe iche na dị ka YouTubers, ihe niile ị ga – eme bụ ịṅa ọchị na igwefoto. Ma eziokwu nke okwu ahụ bụ, ịbụ ỊTuber pụtara ịrụ ọrụ karịrị igwefoto ịhazi ma nyochaa ọdịnaya gị, achọta ụzọ iji chebaa ya nke ọma, na ijide n’aka na iww nụere ereọọ.
Na 201, Jimmy Tatro malitere "TheJimmyTatroChannel," nke e mesịrị gbanwere "NdụAccordingToJimmy. "Tatro nwere ike ịhụ avec na Netflix usoro" Vandale américain. "; yana vidio "22 Jump Street" n / a "nnukwu 2".
Ime nnukwu ego site n’ịbụ onye ỊTuber nwere ike iyi ụda, ma ọ bụ, ma n’ikpeazụ, ihe na-eme ka ọtụtụ ndị ỊTubers nọgide na-eme ọdịnaya abụghị ego. Ọ bụ ọṅụ nke ime ka ndị ọzọ nwee afọ ojuju.
Ịbụ YouTuber pụtara na ọ bụghị mgbe niile ka ị na-achọ ile vidio na elekere anya otu nde na ịnweta ọnụọgụ nọmba nnukwu aha. Ịbụ gịTTuber bụ banyere ịnyefe agụụ gị na ihe okike ma mee ka ọ bụrụ ihe ndị mmadụ na-enwe.
Ya simple, ihe ị na-eche? Malite na-eme vidiyo ndị ahụ!
Kedu ka ị na-esi enweta ιστότοπος εγώ na ụda gị; Ezigbo mma? Ọfọn, gịnị